कोरोना सङ्क्रमण देखिएको १० दिनपछि भर्ना भए प्रधानमन्त्री जोनसन, केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
कोरोना सङ्क्रमण देखिएको १० दिनपछि भर्ना भए प्रधानमन्त्री जोनसन, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको १० दिनपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । आइतवार साँझ उनलाई “लक्षणहरू उस्तै” देखिएको र तापक्रम पनि रहेकाले लन्डन अस्पतालमा पुर्‍याइएको डाउनिङ्ग स्ट्रीटले जनाएको छ।
उनका डाक्टरको सुझावपछि यो कदम “सावधानीको रुपमा” चालिएको बताइएको छ। सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् तर सोमवार बिहान हुने कोरोनाभाइरससम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता भने विदेशमन्त्रीले गर्ने ठानिएको छ।
उपचारका लागि अस्पताल पुगेका जोनसन रातभरि अस्पताल नै बस्ने ठानिएको छ। डाउनिङ्ग स्ट्रीटले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ: “चिकित्सकको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री आज राती परीक्षणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ।”
“कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई लक्षणहरू निरन्तर उस्तै देखिएकोले यो कदम सावधानीका रुपमा चालिएको हो।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसका सबै कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कडा परिश्रमका लागि धन्यवाद दिएका छन् र सर्वसाधारणलाई घरभित्रै सुरक्षित बस्न सरकारले दिएको सुझाव मान्न पनि भनेका छन्।
यसैबीच विश्वभर महामारीमा रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६९ हजार ४१८ पुगेको छ । विश्वका २०८ देशमा फैलिएको यो संक्रमणबाट बितेको २४ घण्टामा ४ हजार ७२८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यो भाइरस संक्रमितको संख्या १२ लाख ७२ हजार ७३७ पुगेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा ७१ हजार २५४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमितमध्ये २ लाख ६१ हजार ४८५ जना उपचारगरि घर फर्किएका छन् । अहिले ९ लाख ४१ हजार ८३४ मा भाइरसको संक्रमण छ । उनीहरु विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेनमा उपचाररत छन् ।
उता मोरक्कोका राजा मोहम्मद छैठौँले आइतबार पाँच हजारभन्दा बढी कैदीहरूलाई माफी दिएका छन् । कारागारमा भीडभाड हुँदा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिनसक्न भन्दै निश्चित चरणमा पार गरिसकेका उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेटले गत महिना देशहरूले बृद्ध बन्दी र माफी दिनसकिने अवस्थाका अपराधीहरूलाई सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै रिहा गर्ने बारे विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।